Umenzi oGqwesileyo wePhepha le3D kunye noMzi mveliso Yilibao
Ukungabinetyhefu kunye nokucoceka: I-XPE izitikha zodonga zenziwe ngegwebu le-XPE, ekhuselekileyo, enobuhlobo kwindalo kwaye ingenabungozi.
Iphepha lodonga elingu-3d
1. Izinto ezingenatyhefu kunye ne-eco-friendly: I-XPE izitikha zodonga zenziwe ngegwebu le-XPE, ekhuselekileyo, enobungozi kwindalo kwaye ingenabungozi.
2.Umgangatho owomeleleyo: uyilo oluqinileyo luyancamathela, lithambile kwaye alunxibi.
3. Ukwahluka kwezitayile: uyilo lwendalo-ntathu lwe-3D, ubume obucacileyo, imibala ecebileyo neyahlukeneyo, ukusika simahla.
4. Easy ukucoca: manzi kunye anti-ukungcolisa, Sula ucocekile.
Iphephadonga luhlobo lwezinto zokuhombisa zangaphakathi ezisetyenziselwa ukuncamathelisa iindonga, ezisetyenziswa kakhulu ekuhombiseni kwangaphakathi kwezindlu, iiofisi, iihotele, iihotele, njl njl.Izixhobo aziphelelanga ephepheni, kodwa zikwabandakanya nezinye izinto. Kungenxa yokuba ineempawu zemibala eyahlukeneyo, iipateni ezityebileyo, isimbo esitofotofo, ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo, ulwakhiwo olululo, kunye namaxabiso afikelelekayo, angenakuthelekiswa nezinye izinto zangaphakathi zokuhombisa.
Ngokwesiqhelo iblitshi yeenkuni zamachiza isetyenziselwa ukuvelisa iphepha elisisiseko, emva koko lisetyenzwe kwiinkqubo ezahlukeneyo, ezinje ngokutyabeka, ukushicilela, ukwenza i-embossing okanye ukugubungela umphezulu, kwaye ekugqibeleni kusikwe kwaye kupakishwe ngaphambi kokushiya umzi-mveliso. Inamandla athile, ukuqina, ukubonakala okuhle kunye nokumelana kwamanzi.
● Ubomi benkonzo ende: Sebenzisa iphepha lodonga ngobuchwephesha bemveliso yobuchwephesha, izinto zalo zingcono, kwaye ubomi benkonzo buya kuba bude.
● Isantya sokwakha siyakhawuleza kwaye sicocekile: kunzima ukupeyinta udonga kwaye kuya kushiya amanye amabala, kwaye kunzima ukusisusa, kodwa xa iphepha lodonga lincanyathisiwe, ukuba iglu iye yachitha ngempazamo kwibhodi yokubaleka okanye ifreyimu yefestile, sihlala sisebenzisa i-rag emanzi okanye isiponji. Ingacocwa ngokukhawuleza.
● Izitayile ezityebileyo: khetha iphepha lodonga olithandayo kwaye wenze nasiphi na isiphumo osifunayo.
● Indawo enkulu yamaxabiso: ixabiso linokuhlangabezana neemfuno zamanqanaba ahlukeneyo.
Ibhegi PE, ibhokisi okanye ibhegi Big ephothiweyo.
Egqithileyo I-XPE yePuzzle yeMat
Okulandelayo: I-EPE yePuzzle Mat
Iphepha lodonga le-foam ye-3d
Iphepha lodongo lwe-Xpe Foam
Iphepha lodonga leXpe Foam